नचिनेको सायरलाई बिर्सनुपर्दा । विनोद दाहाल – Kiran Kumar
– विनोद दाहाल
हामीकहाँ अझ मुख्य रुपमा मैले संगत गरेको समूहमा नेपालभन्दा बाहिरका साहित्यकारहरुका बारेमा कुरा गरेर आफूलाई अली जान्नेबुझ्ने सम्झिने, र अर्को त्यस्तो गर्नेहरुलाई मन नपराउने विशेषता छ । त्यसैले नेपालभन्दा बाहिरका कुराहरु यसरी भन्दा या बोल्दा अलिकति संकोच लाग्छ ।
तर यो संकोच पचाउन राजी भएको छु ।
हिन्दी र उर्दूका सुप्रसिद्द सायर डा. राहत इन्दौरीको बारेमा केही लेख्नुअघि मलाई यति भूमिका बाँध्नु आवश्यक लाग्यो । र, यसको अर्थ हो, ‘कम्तिमा मलाई त्यस्तो नसम्झिनुस् प्लिज !!
म हुर्केको समाजको एउटा तप्काका लागि बीचबीचमा एक÷दुई अंग्रेजी शब्द मिसाउनु या विदेशी लेखक तथा उनीहरुका रचनाबारे २/४ शब्द बोल्नु भनेको विद्वान् भएको एउटा योग्यता हो ।
मंगलबार साँझ ट्विटर चलाउँदै गर्दा बिबिसी हिन्दीको ट्विट् ह्याण्डलबाट एउटा ट्विट् देख्छु जसमा सायर डा. इन्दौरीको मृत्युको खबर हुन्छ ।
त्यसको केही समयपछि डा. राहत इन्दौरी नामक भेरिफाइड ह्याण्डलबाट पनि ट्विट् गरिन्छ, इन्दौरीको मृत्युको खबर त्यसमा पनि उल्लेख हुन्छ ।
थाहा थियो, यो खबर झूठो होइन । तर, मान्छेको मन् न हो मलाई झुठो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । यस्तो अरुबेला पनि भएको थियो, तर कहिल्यै मैले चाहे जस्तो भएन ।
इन्दौरीलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा चिनेको छैन । उनी को हुन् ? के गर्दथे ? आदि विषयहरुका बारेमा मलाई जति जानकारी छ ति इन्टरनेटबाट प्राप्त भएको जानकारी मात्र हो ।
हो उनको बारेमा मेरो ज्ञान तपाईंले सोचेजस्तै हो । इन्टरनेटमा इन्दौरी जस्ता देखिए मैले त्यस्तै देखें, न त्यहाँभन्दा कम न त बढी नै !
यति भनिसकेपछि तपाईले जे अनुमान गर्नुभयो सत्य त्यो भन्दा भिन्न नहुन पनि सक्छन् ।
इन्टरनेट खासगरी फेसबुक युट्युबबाट प्रवाहित हुने जानकारीहरु कति अविश्वाशीला हुन्छन् ? सायद तपाईं यही सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन ?
यो त तपाईंमध्ये कतिपयले हालैका दिनमा पनि भोगेको या अनुभव गरेको कुरा हो । तपाईंको भोगाई या अनुभवलाई अस्वीकार गर् भन्न म सक्दिन । हामीले ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई स्वार्थपूर्तिको साधनका रुपमा गरेको चरम दुरुपयोगको परिणाम हो यो तपाईंको मप्रतिको विश्वास । र मेरो लाचारी यही हो कि म तपाईंलाई यो भन्न सक्दिन कि ‘मेरो कुरामा विश्वास गर्नुस् ।’
तर, वास्तविकता यही हो कि इन्दैरीलाई मैले केही प्रतिशत युट्युब, केही प्रतिशत फेसबुक र केही प्रतिशत ट्विटरका माध्यमबाट चिनेको हुँ । त्यहाँभन्दा बढी होइन ।
बिर्सनेले बिर्सिए पनि सम्झनेले इन्दौरीलाई सम्झँदा यस्तो दृष्यमा सम्झन्छ होला– गजललाई गम्लाङ्ग अंगालेर गजलकै ले मागेको जस्तै बडिल्यांग्वेजमा पर्फमेन्स दिँदै गरेका एक अद्भूत सायर ।
मैले इमान्दारपूर्वक आफ्नो कुरा भनें । अब तल पढ्ने कि नपढ्ने तपाईंको मर्जी । अँ यत्ति चैं भन्छु मैले चिनेका भन्दा चिन्न बाँकी रहेका इन्दौरी कयौं गुणा विशाल छन् ।
यसर्थ न मसँग उनलाई बिर्सनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छ, न त उनलाई सम्झनुपर्ने वाध्यता नै । त्यसैले म उनलाई सम्झिने या बिर्सिने मामिलामा एकदमै सुविधाजनक स्थितिमा छु । म उनलाई सम्झन पनि सक्छु र बिर्सन पनि ।
तर, पख्नुस् है …. ।
तपाईं कहिल्यै बिपी राजमार्ग भएर सिन्धुली–काठमाडौं यात्रा गर्नुभएको छ ? त्यही बाटो नहिडे पनि यस्ता घुमाउरा बाटाहरु त पक्कै हिड्नुभएको होला । त्यो पनि छैन भने फोटो चैं अवश्य हेर्नुभएको छ ।
सिन्धुली–काठमाडौंको घुमाउरो बाटोमा सम्हालिएर बिस्तारै बाइक हाँक्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा सूचना राखिएको हुन्छ, २० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढीको स्पिडमा नहाँक्नुस् भनेर । त्यसरी सम्हालिएर बाइक हाँक्दै गर्दा भाव अलि फराकिलो भए पनि यदाकदा मलाई उनको गजल सम्झना आउँछः
और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं ।
मेरो विचारमा यो गजल सम्झनु भनेको उनलाई सम्झनु हो । किनकि यो गजल सम्झाउन गजलमात्र पर्याप्त थिएन त्यसमा उनको वाचन गर्ने शैलीको भूमिका अझ बढी जिम्मेवार थियो । गजलसँग लुटपुटिने उनको शैली साच्चिकै गजब लाग्छ मलाई ।
मेरो मित्र फकिर मस्त मौलानाले उनको सम्झनामा एउटा ब्लग लेख्यो ‘अलबिदा राहत साहेब’ उसले सो ब्लगमा लेखेको छ, ‘राहत साहबले विश्वलाई अलविदा भनेका छन् । तर, उनले हिन्दी साहित्यमा यस्तो गौरवको विरासत छाडेर गएका छन् त्यो नयाँ पुस्ताको लागि सधैं खजाना हुनेछ ।’ म पनि यो कुरामा असहमत छैन ।
आफ्नो ब्लगमा फकिर थप लेख्छ, ‘एउटा ठूलो सायर त्यो हो, जसले सेरलाई सायरको रुपमा नभई प्रेमीको रुपमा पढ्दछ । जब मानिसहरु राहत इन्दौरीलाई सुन्छन् वा पढ्छन्, तिनीहरुले इन्दौरीलाई त्यस्तो प्रेमी पाउँछन् जसले आफ्ना सेरहरुलाई प्रेमिका भनेर बेलाउँदछ । गालिब, मिर, जौक, फैज, इक्बाल आदिले निर्माण गरेको आजको फराकिलो हिन्दी साहित्यको आकाशमा इन्दौरी सधैं एउटा तारा बनेर चम्किरहेको छ/चम्किरहने छ ।’
यो त भयो ब्लगको कुरा, कहिलेकाहीँ हामी एकठाउँ बसेर गजल सुन्दै गर्दा प्राय इन्दौरीलाई सुन्न छुटाउँदैनौं । उनलाई नसुने कता–कता के–के नपुगेको जस्तो लाग्छ ।
किनकी त्यो उनको खुबी हो, जसले हामीलाई उनीतर्फ तानेको छ ।
हामी युट्युबमा हेर्छौं कहिलेकाँही त मुसायरामा उत्साह हराउँदै जाँदा जब स्टेजमा इन्दौरी इन्ट्री गर्छन् तब माहौल पहिलाको जस्तो रहँदैन । अर्कै भइसक्छ, दशैँ कवितामा लेखनाथ पौडेलले ‘हट्यो सारा हिलोमैलो हरायो पानीको वर्षा,’ भनेझैं ।
उनी गजल सुनाउन स्टेजमा जाँदै गर्दाको इन्ट्री नै गज्जबको लाग्छ मलाई । तपाईलाई लाग्दो हो, ‘अलि बढी नै गफ दियो,’ त्यो तपाईंको निजी कुरा हो, तपाईंलाई लाग्न पाउँछ । मैले मेरो कुरा गरेको, तपाईंको होइन ।
उनी एकपटक माथि आकाशतिर फर्कन्छन्, स्टेज अगाडि उभिएका दर्शकतिर फर्कन्छन्, दायाँबायाँ हेर्छन् । अनि नृत्यांगनाले संगीतको तालमा कम्मर हल्लाए झैँ गजलको लयमा आफ्नो हात माथिपट्टीबाट घुमाएर दर्शकसमक्ष ल्याउँदै गर्दा भन्छन्ः
गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है ?
मैं आ गया हुँ बता इन्तजाम क्या क्या है ?
हामीले (कम्तीमा मैले) उनलाई युट्युबमा सुनेको हुँ र युट्युबमै चिनेको हुँ । न त्यो भन्दा बढी न कम चिन्छु म उनलाई । उनी आफ्ना दर्शक स्रोतालाई गजलले ‘लुटपुट’ बनाउँछन् अनि मस्तिस्कको सम्झनागृहमा आफ्नो स्पष्ट तस्बिर बनाउँछन् कहिल्यै नमेटिने गरी । यो उनको विशेषता हो ।
उनी आफ्नो दिल दुखाइदिन यसरी आग्रह गर्छन् ।
वफा को आजमाना चाहिए था, हमारा दिल दुखाना चाहिए था
आना न आना मेरी मर्जी है, तुमको तो बुलाना चाहिए था ।
यदि उनी सम्झनामा आइहाले भने यस्तै यस्तै कुराले सम्झनामा आउाछन् उनी । यो भन्दा बढी उनलाई सम्झिरहनुपर्ने कुनै खास कारण छैन ।
तर, तपाईंलाई पनि लाग्न सक्छ, यो नै उनलाई सम्झनका लागि पर्याप्त छ । हो यस्तै कुरा गरिरहेका छन् थुप्रैले अहिले । उनीहरु भनिरहेका छन् ‘राहत साहब सम्झनामा रहीरहनु हुनेछ ।’
तर सम्झाउने धागोलाई पनि त हिउँद लाग्छ । वर्षा लाग्छ ! त्यो पनि मक्काउँछ र एकदिन चुँडिन्छ । यो प्रकृतिको नियम नै हो ।
र राहत साहबलाई पनि समयक्रमसँगै धेरैले विर्सनेछन्, यदि बिर्सनुलाई निरपेक्ष रुपमा बुझ्नुहुन्न भने यो सत्य हो । सँगै यो पनि वास्तविकता हो कि उनका रचनाहरु कालजयी छन् । र तीनले उनको सम्झना लामो समयसम्म ताजै बनाउनेछन् ।
इन्दौरीलाई बिर्सन नदिने केही कुरा छ भने त्यो उनको सिर्जना हो । आफ्ना तिनै सिर्जनामा उनी जीवित रहेसम्म मजस्तो चिन्दै नचिनेका मान्छेले पनि उनलाई बिर्सन सजिलो छैन ।
फेरि पनि वास्तविकता त यही हो, समयसँगै उनलाई पनि सबैले बिर्संदै जान्छन्, आफ्नैले पनि । तर, जब उनी सम्झिइन्छन्, सानदार रुपमा सम्झिइन्छन् । बिर्सनेले बिर्सिए पनि सम्झनेले इन्दौरीलाई सम्झँदा यस्तो दृष्यमा सम्झन्छ होला– गजललाई गम्लाङ्ग अंगालेर गजलकै ले मागेको जस्तै बडिल्यांग्वेजमा पर्फमेन्स दिँदै गरेका एक अद्भूत सायर ।
Postbindo dahal, post, rahat indauri, sayar